मनिफोल्ड GIS - Geofumadas मा हाइपरलिंकहरू कसरी सिर्जना गर्ने
मनिफल्ड जीआईएसमा हाइपरलिंक कसरी सिर्जना गर्ने
फेब्रुअरी, 2009 मितोल्ड GIS
एउटा नक्शामा हाइपरलिंक सँधै आवश्यक हुन्छ, हामीले यसको प्रयोग गरेका छौं, उदाहरणका लागि, क्याडस्ट्रल तहमा फोटोग्राफ, क्याडस्ट्रल सर्टिफिकेट, रेजिस्ट्री डीड वा नगरपालिका तहको सम्बन्धमा उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकारी सम्बद्ध गर्न को लागी, जुन मुख्यतः त्यो हुँदैन यो सजीलो ट्याबलेट गरिएको छ। हामी प्रोग्रामको प्रयोग गरी नक्शामा हाइपरलिंकहरू कसरी बनाउने भनेर यस मामलामा हेर्नेछौं मितोल्ड GIS.
मनिफोल्डले .map विस्तारका साथ फाइलहरू ह्यान्डल गर्दछ, जुन आफैंमा व्यक्तिगत जियोड डाटाबेसको बराबर हुन्छ, जहाँ छविहरू, भेक्टर तहहरू, तालिकाहरू, इत्यादि भण्डारण गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ केवल लिंक गरिएको फाईलहरू जस्तै आर्कजीआईएस एमएक्सडी जस्तो हुन सक्छ।
त्यसैले हाइपरलिङ्कलाई सम्बद्ध गर्न, वस्तुसँग तालिका हुनुपर्छ; यो नक्शा बाहिर (लिङ्क गरिएको) वा टाइप Oracle, MySQL आदिको बाह्य डेटाबेसमा हुन सक्छ।
2। यसलाई कसरी गर्ने?
पहिलो कुरा नयाँ स्तम्भ थप्नको लागि हो, यो नाम र प्रकार निर्दिष्ट गरिएको छ, यस अवस्थामा हामीले url छनौट गर्यौं।
त्यसपछि यो सम्बद्ध फाईलको ठेगानामा राखिएको छ, यो मेशिनको डिस्क मध्ये एक, स्थानीय इन्टरनेटमा आईपी वा टोली नाम वा इन्टरनेटमा पनि प्रकारको युआरएलको साथ स्थानीयमा हुन सक्छ।
गुणा ठाउँहरू जुन ठेगानामा वेब url मा छ, पानाहरू स्वीकार गर्दछ, वस्तु कल गर्दा यसले क्यारेक्टरको परिवर्तन गर्दछ।
हाइपरलिंक खोल्नको लागी केवल नक्शा क्लिक गरिएको छ र फाइल सम्बन्धित कार्यक्रममा हटाइएको छ।
त्यसो गर्दा यसले प्राथमिक वस्तुको रूपमा हाइपरलिंक लिने छैन, यसले Ctrl कुञ्जी प्रयोग गरी क्लिक गरेको छ, यस तरिकाले यो वस्तुसँग सम्बन्धित डेटा तालिका बढाउनेछ।
आईएमएस सेवामा फाइल पठाउनको लागि, हाइपरलिङ्क बनाए राखिएको छ, यो आईएमएस प्रकाशनमा धेरै फाईलहरूसँग काम गर्न प्रयोग गरिएका चालहरू मध्ये एक हो। जस्तै हामीले यो देख्यौं केहि दिन
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो प्रत्यक्ष लेखक, फोटो एल्बम
अर्को पोस्ट7चमत्कार, 77 को युद्धअर्को »